तीन दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो - प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
तीन दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्ग एकतर्फी खुल्यो
कार्तिक ४, २०७८ लक्ष्मी गौतम
पाँचथर — अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोका कारण तीन दिनदेखि अवरुद्ध मेची राजमार्गको पाँचथर खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । राजमार्गको फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरो डोजर लगाएर पन्छाइएसँगै एकतर्फी सञ्चालनमा आएको हो ।
पहिरो पन्छाइएपछि ताप्लेजुङदेखि इलामको रक्सेस्थित देउरालीसम्म सवारी र ढुवानीका साधन सञ्चालन भएका छन् । देउरालीमा गएको पहिरो पन्छाउन पनि पाँचथर र इलामका डोजर प्रयोग गरिएको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सडक सञ्चालनमा आएपछि ताप्लेजुङ र पाँचथरबाट इलाम र झापा तथा इलाम र झापाबाट पाँचथर तथा ताप्लेजुङ जाने यात्रुसँगै पाथीभरा मन्दिर दर्शनमा हिँडेकाहरु गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
सडक पन्छाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा विभिन्न स्थानीय तह र निर्माण कम्पनीका डोजर प्रयोग गरिएको थियो । मेची राजमार्गमा गएको सयभन्दा धेरै ठाउँमा गएको पहिरो पन्छाउन १० वटा डोजर परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला ढकाल बताउँछन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १६:१८
नन्कुन्नी-निर्मला प्रकरण : नेपालगन्ज पुग्यो छानबिन समिति
काठमाडौँ — बाँकेका नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको सरकारी टोली नेपालगन्ज पुगेको छ ।
महिला अधिकारकर्मी र आफन्तको ५२ दिने संघर्षपछि सरकारले गत साउनमा घरैमा मृत भेटिएकी धोबी र वेपत्ता रहेकी कुर्मीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठनसँगै अधिकारकर्मी र आफन्तले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीले टोलीका सबै सदस्यहरु नेपालगन्ज पुगेको बताए । ‘हामी आज यहाँ आयौँ । अब काम थाल्छौँ । ७ दिनको समय हामीलाई दिइएको छ, त्यहीअनुसार के–के गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा एकमत बनाएर काम थाल्छौँ,’ उनले भने ।
रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रामप्रकाश साह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक विरेन्द्रसिंह कार्की, कानुनका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
धोबी र कुर्मीलाई महिला भएकै कारण अन्याय गरिएको र उनीहरुको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको भन्दै त्यहाँका अधिकारकर्मी र आफन्तले १९ दिनसम्म बाँके प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर न्यायका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, त्यत्ति गर्दा पनि आफूहरुको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै २० दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका उनीहरुले १२ दिनसम्म माइतीघरबाट धर्ना दिए ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी रुबी खानले ११ दिनसम्म अनशन बसिन् । सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि अधिकारकर्मी र आफन्तहरु पनि बुधबारै नेपालगन्ज फर्किएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १६:११
कांग्रेस सोलुखुम्बुको सभापतिमा शेर्पा विजयी
देउवा र खाँणले पार्टीभित्र अराजक समूहलाई संरक्षण दिइरहेका छन् : शेखर कोइराला